Maitiro ekunyora rondedzero, zvese zvaunoda kuti uzive | Zvazvino Zvinyorwa
Nzira yekunyora rondedzero
John Ortiz | | Bvunzo, Type, Literature
Nzira yekunyora rondedzero.
Maitiro ekuziva kunyora chinyorwa ari nyore. Mushure mezvose, inzira yakarongeka yekuratidza yako wega pfungwa pane imwe nhaurwa. Kazhinji, zvinoitwa kubva pakuongorora kwakakomba. Naizvozvo, zvinyorwa zvinomiririra chishandiso chakasimba chekudzidzisa nekuda kwekukwanisa kumutsa gakava kana nharo dzakapokana.
Saizvozvowo, rondedzero Iyo inofungidzirwa senge runyorwa runyorwa rwakanyorwa muprozi iyo iine thesis inoenderana nezviitiko zvega uye maonero emunyori. Zvimwechetezvo, murudzi urwu rwemanyoro kushandiswa kwezvinyorwa zvinyorwa uye zvekushongedza zviwanikwa zvinoshanda chose. Neichi chikonzero - mune chairo nyaya yenyaya yekunyora - inowanzo rondedzerwa senge nhetembo kana hunyanzvi.
1 Mhando dzekuyedza
1.1 Rondedzero yekukakavara
1.2 Rondedzero yesainzi
1.3 Rondedzero yekutsanangura
1.4 Rondedzero yefilosofi
1.5 Nyaya yakakosha
1.6 Rondedzero yemagariro
1.7 Nhoroondo yezvakaitika kare
2 Mamiriro ekuedza
3 Chimiro chekuvandudza kusimudzira chinyorwa
4 Matanho ekunyora rondedzero
4.1 Asati anyora
4.1.1 Kufarira uye kutsvagisa
4.1.2 Maitiro ekuenda online
4.1.3 Gadzira poindi yekutarisa uye isa pamwechete rondedzero
4.2 Panguva yekunyora rondedzero
4.2.1 Kugara uchiongorora
Kunze kwezvinyorwa, Kune dzimwe nzira dzechinyorwa dzekufunga usati wafunga kunyora imwe. Pazasi, ivo vanotsanangurwa muchidimbu:
Imhando yekudzidzira inowanzoitika muzvinyorwa zvezvematongerwo enyika kana munhaurirano dzine chekuita nezvehupfumi. Kunyangwe zvese zvinyorwa zvine nharo, kirasi iyi yakataurwa zvakanyanya nekuti tsananguro idzi dzakanyanya kunetseka (zvichienzaniswa nerondedzero yekunyora) Zvakanaka, munyori wenyaya anofanirwa kuvimba nedzidziso dzinogamuchirwa dzevamwe nyanzvi kuti vadzivirire maonero ake. Munzvimbo ino, ainyatsooneka kumira Jose Marti.
Iyo inosiyaniswa neyakaomarara pakudzidza uye chimiro maererano nemaitiro esainzi. Saizvozvo, inotungamira mukudzika kukuru kwekukakavara uye rutsigiro rwakarongedzwa panguva yekutsigira pfungwa yega yega yakapihwa. Chinangwa chechinyorwa chesainzi ndechekudzidza musoro wenyaya kana mamiriro ezvinhu wozopa synthesis.
Iyo yakakodzera kwazvo bvunzo modality yekuwongorora kwekuoma kunzwisisa mibvunzo uye tsananguro dzechinangwa chekuita. Ipapo, munyori wenyaya anogadzirira zvinyorwa zvinotsanangurwa, zvine hungwaru, inokwanisa kuburitsa zvese zvine chekuita nenyaya uye ichisiya ichitsanangurwa zvakadzama.
Sezvinoreva zita iri, inoratidzira pane akasiyana mafirosofi ekufunga. Nekudaro, inovhara misoro yekuvapo kwekufungidzira senge rudo, zvinoreva hupenyu, kutenda, kufa kana kusurukirwa, pakati pevamwe. Nezvikonzero izvi, iri mhando yerondedzero ine chinzvimbo chekuzviisa pasi uye kukwidziridzwa kwepashure.
Kunyangwe uchipa kufanana kwakawanda nerondedzero yekukakavara, kuyedza kwakasimba kwakasimba zvine chekuita nekubata humbowo. Saizvozvowo, zvidzidzo zvekare uye kuunganidzwa kwezvakaitika zvinoreva kusagadzikana kwakaenzana neiyo rondedzero yesainzi.
Iwo magwaro umo munyori wenyaya anonyatso fungisisa mukufunga zvine chekuita nematambudziko emagariro uye / kana kuratidzwa kwetsika. Kunyangwe murondedzero yezvematongerwo enyika paine mukana wekubvunzana pamwe nemunyori pfungwa, dzinofanirwa kutsigirwa nezvidzidzo zvakakomba zvedzidzo. Neichi chikonzero, mhando yerondedzero iyi inoonekwa sebazi rerondedzero yesainzi. Terenci moix vakakunda mune aya marudzi emiedzo.
Nhoroondo yezvakaitika kare
Mune mhando yerondedzero iyi munyori anoratidza maonero ake nezvevamwe nhoroondo yechiitiko chekufarira. Kazhinji rugwaro rune fananidzo pakati pezvinyorwa zviviri kana kupfuura zvezvakaitika. Kubva pavari, munyori wenyaya anotsanangura kuti ndeupi anoita seakarurama. Iwo wega mutemo usingazungunuke mukukakavara hausi wekutaura pane zviitiko zvisina rutsigiro runosimbiswa (asi, unogona kujekesa paunenge uchifungidzira).
Icho chinyorwa chakachinjika uye chinoshanduka, pasina iwo madimikira. Nekudaro, iwe unogona kusanganisa akasiyana masitaera ekuumbwa - sekureba sekuenderana kuchichengetwa - pamwe neakasiyana marhetori, kutsamwa, kushatisa, kutsoropodza, kana kunyangwe melodic uye toni toni.
Izvo zvinoshanda kuratidza iwo wega mafungiro emunyori pachinhu chakurukurwa. Kazhinji nechinangwa chekunyengetedza, chinodzidzisa, kana chinonakidza.
Zvinotenderwa, munyori anofanirwa kugona musoro wenyaya wakurukurwa asati ataura zvaakafunga kutora tsananguro dzakarurama.
Pfungwa yega yega inofanirwa kuve nechikafu chinobva mukuferefeta.
Munyori anochengetera nzira yaanotaura nayo chidzidzo (irony, kukomba, kusapedzisa zvemukati, zvemunhu kana zvekutarisira pamwe, kuti kuburitse gakava) ...
Iwo mavhezheni haasi akareba magwaro, nekudaro, pfungwa dzakataurwa dzakajeka uye dzakajeka sezvinobvira.
Chimiro chekuvandudza kusimudzira chinyorwa
Muchikamu chino munyori anopa muverengi pfupiso pfupi pamusoro penyaya yakaongororwa nepfungwa dzayo dzakasiyana. Iyo yekupedzisira inogona kusimudzwa muchimiro chemubvunzo kana sechirevo chakamirira kusimbiswa. Chero zvazvingaitika, iwo masarudzo anoratidza mavambo uye manyorerwo emunyori.
Chirevo chezvikonzero, mazano uye maonero. Pano inofanirwa kuiswa yakawanda (yakakodzera) dhata uye ruzivo sezvazvinogona. Zvakare, munyori anofanirwa kujekesa kuti ndezvipi zvikonzero zvake zvakakosha zvekutsigira kana kupokana nepfungwa yakanyorwa musumo. Pasina kukundikana, yega yega pfungwa inotsigirwa zvakafanira.
Chikamu chekupedzisira cherondedzero kupfupisa kwezvose zvakatsanangurwa mukusimudzira kuti vape mhinduro sekuvhara. Zvakare, mhedziso inogona kusimudza isingazivikanwe mitsva kana - mune zvinyorwa zvekunyora kana zvekutsoropodza - inoratidza toni yekunyomba nezve basa. Kune rimwe divi, zvinyorwa zvebhaibheri zvinoonekwa panoperera chinyorwa (pazvinenge zvichidikanwa).
Matanho ekunyora rondedzero
Kufarira uye kutsvagisa
Chekutanga pane zvese, musoro wenyaya unotaurwa unofanirwa kunge uchifarira munyori. Sezviri pachena, zvinyorwa zvakanaka zvakakosha. Parizvino, hapana panogumira midhiya: zvinyorwa zvedzidzo, zvinyorwa zvepepanhau, mabrochure, zvinyorwa zvekuona uye, zvechokwadi, internet.
Maitiro ekuenda online
Iyo yakawanda vhoriyamu yeruzivo inowanikwa paInternet inomiririra yakakosha uye megadiverse sosi iri pakati peinotyisa yedhijitari iripo. Zvisinei, Iko kuomarara kunetsekana pakushandisa dhata yakawanikwa paInternet iri - nekuda kwenhau dzenhema - kunyatso simbisa chokwadi cheicho icho.
Gadzira poindi yekutarisa uye isa pamwechete rondedzero
Kamwe kana musoro wenyaya wasarudzwa uye kuongororwa, munyori wenyaya anofanirwa kumisikidza chinzvimbo asati apa chirevo (kuti chisimbiswe kana kupikiswa). Ipapo, munyori anoenderera mberi nekugadzira chirongwa chekunyora, icho chinenge chichizobatsira kuronga kuteedzana kwenharo dzake. Ndokunge, ndedzipi pfungwa dzichakurukurwa musumo, budiriro uye mhedziso, nevakadzokororwa kubva muzvinyorwa zvakabvunzwa.
Panguva yekunyora rondedzero
Chinyorwa chakagadzirirwa chinonzwisisika kumuverengi here? Mitemo yese yekunyora neyekuperetera yakateedzerwa nemazvo here? Maitiro ekunyora anoenderana nemusoro wenyaya wakatariswa? Kugadziriswa kwemibvunzo iyi hakudziviriki pakuumba chinyorwa. Mupfungwa iyi, maonero emapati echitatu (shamwari, semuenzaniso) anogona kubatsira.
Pamusoro pe, munyori anofanirwa kunzwisisa kuti kuverenga zvekare kunoongorora kunyatsoongorora mazwi nezviyereso zvemazwi zvinoshandiswa. Nekuti comma kana izwi rakaiswa munzvimbo isiri iyo rinogona kuchinja zvachose chinangwa chepakutanga chemunyori mukutaura maonero. Neichi chikonzero, rondedzero inofanirwa kunyorwazve kakawanda sezvazvinodiwa.
Zviripachena vanyori vasingazivikanwe havana mukana wekukurumidza wekushambadzira midhiya. Kunyange zvakadaro, digitization yakagadzirisa kufambiswa kwezvinyorwa kuburikidza nehukama hwehukama uye zviwanikwa senge vanyora, podcast kana maforamu akasarudzika. Chokwadi, kuita kuti posvo ioneke mukukura kweiyo cyber chimwe chinhu chimwe (asi kune ruzivo rwakawanda nezvazvo futi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Bvunzo » Nzira yekunyora rondedzero
Izvo zvinogara zvakanaka kana uchinyora rondedzero, kutumira preliminary sketch yekupedzisa kune mumwe munhu waunovimba naye uye nekutonga kukuru kuti uzive kana pfungwa yepakati payo inowanikwa.
Mikel Santiago. "MuSpain vanyori venyika vazhinji vanoverengwa"
Mabhuku eKisimusi. Sarudzo